HUAWEI FreeBuds Pro - HUAWEI Myanmar
ဆူညံသံများကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီး စည်းချက်တွေထဲမှာ စီးမျောလိုက်ပါ။
အမြဲချိတ်ဆက်ထားပြီး HUAWEI FreeBuds Pro
အတွင်း၊အပြင်မှ ဆူညံသံများအားလုံးကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
Hybrid Active Noise Cancellation Technology က inward-facing နှင့် outB7ward-facing မိုက်ခရိုဖုန်းများမှ နားအပြင်နှင့်အတွင်းမှ ကျန်ရှိနေသောဆူညံသံများကို ရှာဖွေပြီး dynamic drivers မှ တိကျသော anti-noise signals ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ 40 dB1 အထိ noise cancelling ပြုလုပ်နိုင်ပြီး HUAWEI FreeBuds Pro က တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် သန့်စင်သောအတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ ဆူညံသံများကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
HUAWEI FreeBuds Pro ပတ်ဝန်းကျင်မှအသံများကို သိရှိနိုင်ပြီး HUAWEI FreeBuds Pro က noise cancellation mode ဖြင့် လိုက်ဖက်သောအနေအထားကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
ခရီးသွားသည့်အခါမှာ ဆူညံသံအားလုံးကို ဖယ်ထုတ်ပြီး သက်တောင့်သက်တာအိပ်စက်နိုင်ပါတယ်။ အနှောင့်အယှက်များအားလုံးအဝေးမှ ထွက်ခွာပြီး သီချင်းထဲမှာ စီးမျောလိုက်ပါ။
စာရွက်လှန်ခြင်း၊ စာရိုက်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာများနှင့် အလုပ်ခွင်၊ စာကြည့်တိုက်နှင့် အခြားသောတိတ်ဆိတ်သော ပတ်ဝန်းကျင်မှအသံများကို လျော့ချပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်မှဆူညံသံများကို တော်တော်များများလျော့ချလိုက်တာကြောင့် စည်ကားနေတဲ့လမ်းမ သို့မဟုတ် လူများတဲ့ကော်ဖီဆိုင်တို့မှာ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော သီချင်းသံ သို့မဟုတ် ဂိမ်းအသံကို ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ earbuds များကို ဖယ်ရှားရန်မလိုအပ်ပါ။ ကြာကြာနှိပ်ထားရုံနှင့် awareness mode ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့ Voice Mode2 က လူတစ်ယောက်စကားပြောသံကို ထင်ရှားစွာကြားနိုင်ရန် ပတ်ဝန်းကျင်က အသံများကိုလျော့ချပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် လေဆိပ်ကကြေညာသံတွေ သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းနဲ့ စကားပြောတာတွေ မလွှတ်သွားတော့ဘူူးပေါ့။
HUAWEI FreeBuds Pro က ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုမှာ စစ်မှန်တဲ့တေးဂီတကို ခံစားနိုင်ရန် အားကောင်းသောအသံကို ထုတ်လွင့်ပေးပါတယ်။
သံလိုက်သိပ်သည်းဆမြင့်မားခြင်းနှင့် ၁၁ မီလီမီတာရှိ driver ကတည်ငြိမ်အောင် ထောက်ပံ့ပေးထားသော‌ကြောင့်
အောင် လျော့ချပေးပြီး bass အသံကို နားကြပ်အတွင်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
HUAWEI FreeBuds Pro ကသုံးစွဲသူများနားတွင်ကြားရသောအချိန်နဲ့ တပြေးညီအချက်ပြမှုအ‌ပြောင်းအလဲတွေကို ရှာဖွေပြီး ကြိမ်နှုန်းတုန့်ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသော EQ ကိုချိန်ညှိပေးပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည့်အချိန်မှာပင် ချောမွေ့ပြီးရှင်းလင်သောဂီတကို ခံစားနိုင်ပါတယ်။
Hybrid Call Noise Cancellation အသစ်က 3-mic system နှင့် bone voice sensor တို့ကိုပေါင်းစပ်ပေးထားပြီး နောက်ခံဆူညံသံများကို လျော့ချပေးသောကြောင့် စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့အသံကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာကြားနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းပြောဆိုနေစဉ်အတွင်းတွင် bone voice sensor သည် အရိုးတုန်ခါမှုကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ခြင်းဖြင့် လူ၏အသံကိုရှာဖွေပြီး
outward-facing microphones နှစ်ခုက အသံလာရာလမ်းမှ သင့်အသံကိုဖမ်းယူနေစဉ်မှာ inward-facing microphone က သင့်အသံကို ပိုမိုကြည်လည်စွာကြားနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
လေထုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ပွတ်တိုက်မှုအသံတို့ကို ဖယ်ရှားပေးရန် နားကြပ်ကို windproof တည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်း တို့ဖြင့် နူးညံ့စွာဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ပြေးခြင်းနှင့် လမ်းလျှောက်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ရာမှာ,
လေထန်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆူညံသံကို ဖယ်ရှားနိုင်ရန် နားကြပ်ရဲ့ထိပ်နဲ့အောက်
ဆုံးမှာရှိတဲ့ microphones နှစ်ခုမှာ aniti-wind noise-cancellation
HUAWEI FreeBuds Pro မှာ dual-antenna
ကျယ်ပြန့်သောကွန်ရက်ကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ သင့်ဖုန်းကပိုက်ဆံအိတ်၊
HUAWEI FreeBuds Pro က တည်ငြိမ်သောဆက်သွယ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
အဆင့်မြင့် Dual Antenna
နားကြပ်တစ်ခုချင်းစီမှာ bluetooth antenna
နှစ်ခုပါဝင်ပြီး ၃၆၀° signal လွှမ်းခြုံမှုပေးပြီး
5.2 Chipset ကြောင့်ချိတ်တက်မှုများကိုပိုမိုချောမွေ့အဆေင်ပြေစေပြီး
လိုင်းချိ တ်ဆပ်လစ်ဟာမှုများကို 180 ms5အထိလျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
သံလိုက်သိပ်သည်းဆမြင့်မားခြင်းနှင့် ၁၁ မီလီမီတာရှိ driver ကတည်ငြိမ်အောင် ထောက်ပံ့ပေးထားသော‌ကြောင့် ဆူညံသံများကို အံ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် လျော့ချပေးပြီး bass အသံကို နားကြပ်အတွင်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
ဖုန်းပြောဆိုနေစဉ်အတွင်းတွင် bone voice sensor
လေထန်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆူညံသံကို ဖယ်ရှားနိုင်ရန် နားကြပ်ရဲ့ထိပ်နဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ microphones နှစ်ခုမှာ aniti-wind noise-
နားကြပ်တစ်ခုချင်းစီမှာ bluetooth antenna နှစ်ခုပါဝင်ပြီး ၃၆၀°
signal လွှမ်းခြုံမှုပေးပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှအနောက်အယှက်များမရှိဘဲ
လိုင်းချိတ်ဆပ်လစ်ဟာမှုများကို 180 ms5အထိလျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
အရှိန်ပြင်းပြင်းသွားနေတဲ့အချိန်မှာ dual anti-wind noise structure က ကြည်လင်သောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို ရရှိရန်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
မြန်ဆန်သောအမြန်နှုန်းဖြင့် လျင်မြန်တိကျသော ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကို ခံစားလိုက်ပါ။
သင့် vlog အတွက်အဆုံးအထိသွားလိုက်ပါ
ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာ အဝေးနေရာများအထိ လွတ်လပ်စွာသွားလိုက်ပါ။ HUAWEI FreeBuds Pro မှာ 20 Hz7 အထိတည်ငြိမ်စွာဖမ်းယူနိုင်သည့် အရည်အသွင်းမြင့် recording အသုံးပြုထားတာကြောင့် အ‌ဝေးတွင်ရှိသောအသံကိုပါဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။ ပြင်ပကမ္ဘာမှာသင်ကြားရတဲ့အသံတွေကို မှန်ကန်စွာပြန်လည်ထုတ်လွှင့်နိုင်တာကြောင့် စိတ်အားထက်သန်တဲ့ ဘလော့ဂါများအတွက် အကောင်းဆုံးကရိယာြဖစ်ပါတယ်။
HUAWEI FreeBuds Pro က သင်ချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့အသံနဲ့ လိုက်ဖက်စေဖို့ သေသပ်တောက်ပသောငွေရောင်ဖြင့် Silver Frost၊ ခေတ်မီဆန်းပြားလှပသောပုံစံအတွက် Ceramic White နှင့် အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းအတွက် သင့်လျော်သော Carbon Black ဆိုပြီး အရောင်(၃) ရောင်ရှိပါတယ်။
ပျော့ပျောင်းတဲ့ စီလီကွန်နားကြပ် အရွယ်အစား (၃)မျိုးကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Tip Fit test က သင့်နားရွက်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မည့်တစ်ခုကို‌ ကူညီ‌ရွေးချယ်ပေးပါတယ်။8
အရှေ့နှင့်အနောက်နားအတွင်းပတ်လမ်းဒီဇိုင်းက နားအတွင်း လေဖိအားအတွင်းအပြင် ညီမျှစေပြီး သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်စေရန် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီး ပေါ့ပါးသောကိုယ်ထည်က အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေစေပြီး စမတ်ကျသောဒီဇိုင်းကို ပေးစွမ်းပါတယ်။
သင်အလိုရှိသလိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ sensor တွေက တုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်။ swipe လုပ်ခြင်း၊ press သို့မဟုတ် pinch လုပ်ခြင်း၊ အသံအတိုးအကျယ်လုပ်ခြင်း၊ ဖုန်းလက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် သီချင်းအလွယ်တကူပြောင်းခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ထိန်းချုပ်ရန်လွယ်ကူစေပါတယ်။
noise cancellation ကိုပိတ်ထားပြီး တစ်ခါအားသွင်းထားရုံနှင့် ၈ နာရီကြာသီချင်းနားထောင်နိုင်ပြီး charging case နှင့်တွဲဖက်လိုက်ပါက ၃၆ နာရီကြာအောင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။9သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်ကိုအသုံးပြုပြီး revere-charge နှင့် charging case ကို သွားရင်းလာရင်းနှင့်အားသွင်းနိုင်ပါသည်။10
noise cancellation ဖွင့်ထားလျှင် ၃.၅ နာရီကြာ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်နိုင်ပြီး charging case 9နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုလျှင် ၁၆ နာရီထိကြာရှည်ခံပါတယ်။
noise cancellation ကိုဖွင့်ထားပြီး တစ်ခါအားသွင်းထားပြီး ၅ နာရီကြာအသုံးပြုနိုင်ပြီး charging case နှင့်တွဲဖက်လိုက်ပါက ၂၂ နာရီကြာအောင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။9
Charing case ကိုဖွင့်လိုက်ပါ၊ ပထမဆုံးချိတ်ဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက် သင့်ဖုန်း11 ပေါ်မှာ pop-up ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိနေသည့်ဘက်ထရီကိုပါ ဖော်ပြပေးပါတယ်။
Device နှစ်ခုချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်း၊ ချောမွေ့စွာပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း
Device နှစ်ခုကိုတပြိုင်နက်တည်းချိတ်ဆက်ထားနိုင်ပြီး12နားကြပ်ကို pinch ပြုလုပ်ရုံဖြင့် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြားကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ စမတ်ထုတ်ကုန်များနှင့် PC များ၊ တက်ဘလက်များ၊ စမတ်ဖုန်းများကြားမှာ ချောမွေ့စွာပြောင်းရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
အဆင့်မြင့် Compactness Detection
အဆင့်မြင့် Compactness Detection က သင်နားကြပ်ဝတ်ဆင်ထားချိန်မှာတောင် သင်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျရှိမရှိ စစ်ဆေးပေးနိုင်ပါတယ်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော noise cancellation နှင့် ပိုမိုစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောအသံတို့အတွက် အသင့်တော်ဆုံးကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ HUAWEI FreeBuds pro ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ
သင့်ရဲ့ HUAWEI FreeBuds Pro ကို သီးသန့်ဖြစ်နေသော ဘယ် သို့မဟုတ် ညာဘက်နားကြပ်နှင့် charging case ထဲတွင်ထည့်ထားသောအစုံလိုက်ကို ပြသပေးနိုင်သည့် မြေပုံပါရှိသော AI Life App တွင်ရှိသည့် "Find My Earphones"13 ဖြင့်လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ အနီးအနားမှာရှိနေသည့်အခါတွင် အသံမြည်အောင်ပြုလုပ်ပြီးလည်း ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။14
သင့် HUAWEI FreeBuds Pro
အတွက် AI Life ကို ရယူလိုက်ပါ
သင့်ရဲ့ HUAWEI FreeBuds Pro အတွက် AI Life App ကိုရယူလိုက်ပါ။ အနည်းငယ်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ဆူညံသံမျိုးစုံကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း၊ သင့်နားနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နေရန်ရှာဖွေနိုင်ခြင်း၊ သင့် earbuds ကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်းတို့အပြင် အခြားသော သီးသန့် feature များကိုပါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဖုန်းတွင် QR Code ကို scan ဖတ်၍ ‌ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး ဖော်ပြထားသည့်အညွှန်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။.
အဆင့်(၁) ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် SGS ရရှိထားသော HUAWEI FreeBuds Pro ရဲ့ ဆန်းသစ်သော green technology က လုပ်ငန်းရဲ့စိမ်းလန်းသောစံချိန်စံညွှန်းများထဲမှာ ဦးဆောင်နေပါတယ်။
ဤ data သည် Huawei ဓာတ်ခွဲခန်းမှရရှိသောရလဒ်ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်သက်ရောက်မှုသည် အသုံးပြုသူဋ္ဌ နားအရွယ်အစား၊ နားကြပ်၊ နားဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဝတ်ဆင်သည့်ပုံစံနှင့် လှုပ်ရှားမှုပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
AI Life App ကိုဒေါင်းလုပ်ရယူပြီး Awareness Mode ထဲသို့ဝင်ပြီး Voice Mode ကိုဖွင့်ထားပါ။ Android အသုံးပြုသူများက AI Life app ကို Huawei AppGallery မှာရှာဖွေဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။ IOS အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ HUAWEI AI Life app ကို AppStore သို့မဟုတ် Quick Start Guide ထဲမှာပါဝင်တဲ့ QR Code ကို scan ဖတ်ပြီး ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဤ feature သည် version 1.0.0.122 နှင့်အထက် software အသုံးပြုသောနားကြပ်လိုအပ်ပါသည်။
ဤ data သည် Huawei ဓာတ်ခွဲခန်းမှရရှိသော ရလဒ်ဖြစ်သည်။ HUAWEI FreeBuds Pro သည် 20 km/h ဖြင့် အမြန်စက်ဘီးစီးသည့်အခါတွင် ကောင်းမွန်သောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို ပေးစွမ်းပါတယ်။
ဤ data သည် Huawei ဓာတ်ခွဲခန်းမှရရှိသော ရလဒ်ဖြစ်သည်။
Wireless high-quality Recording က အသံကို သင့်စမတ်ဖုန်းမှအစား မိုက်မှတဆင့်အသံကို ဖမ်းယူပါသည်။ ဤ feature ကိုဖော်ပြထားသော Huawei စမတ်ဖုန်းများတွင်သာ ရရှိနိုင်ပါသည် - HUAWEI Mate 40, HUAWEI Mate 40 Pro, HUAWEI Mate 40 Pro+, HUAWEI Mate 40 RS Porsche Design, HUAWEI P40 Pro နှင့် HUAWEI P40 Pro+ . ဤ featuer ကိုအသုံးပြုရန် EMUI 11 နှင့်အထက်ကို upgrade ပြုလုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် စမတ်ဖုန်းကင်မရာများ၊ နာမည်ကြီးဗီဒီယိုအတိုရိုက်ကူးသော App များ သို့မဟုတ် Live Streaming ပြုလုပ်နိုင်သော function ပါဝင်သည့် Apps များနှင့် တွဲဖက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤ feature သည် Bluetooth ချိတ်ဆက်နေသောနေရာအတွင်းသာ ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဤ data သည် Huawei Labs မှလာသောရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။
Tip fit test feature သည် AI life App နှင့်သာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Android အသုံးပြုသူများက AI Life app ကို Huawei AppGallery မှာရှာဖွေဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။ IOS အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ HUAWEI AI Life app ကို AppStore သို့မဟုတ် Quick Start Guide ထဲမှာပါဝင်တဲ့ QR Code ကို scan ဖတ်ပြီး ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့် အားသွင်းသည့် data သည် Huawei ဓာတ်ခွဲခန်းမှရရှိသော အောက်ပါအခြေအနေများတွင်ရရှိသော ရလဒ်ဖြစ်သည် - volume 50% နှင့် AAC mode ကိုဖွင့်ထားသည်။ အမှန်တကယ်ဘက်ထရီသက်တမ်းသည် အသံအတိုးအကျယ်၊ အသံလာရာအရင်းအမြစ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ၊ ထုတ်ကုန်လုပ်ဆောင်ချက် နှင့် အသုံးပြုပုံပေါ်မူတည်ပါသည်။ ဖော်ပြထားသော EMUI 11 နှင့်အထက်အသုံးပြုသော Huawei စမတ်ဖုန်းများ တွင်အသုံးပြုနိုင်သည် - HUAWEI Mate40, HUAWEI Mate 40 Pro, HUAWEI 40 Pro+, HUAWEI Mate 40 RS Porsche Design, HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro, HUAWEI P40 Pro+. နားကြပ်ကိုအခြားသော device များနှင့် အသုံးချိတ်ဆက်အသုံးပြုပြီး အမှန်တကယ်အသုံးပြုသောရလဒ်သည် ကွဲပြားနိုင်သည်။
Reverse charging feature သည် reverse charging ကို အထောက်အပံ့ပေးသောထုတ်ကုန်များလိုအပ်ပါသည်။
ဤ feature သည် EMUI10 နှင့်အထက်အသုံးပြုသော Huawei စမတ်ဖုန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
Dual Device Connection သည် ချိတ်ဆက်ရန်ဖွင့်ထားပြီးသားဖြစ်သည်။ အခြားသော third-party media apps သည် ပြောင်းနေသည့်အချိန်တွင် speaker မှကြားရနိုင်သည်။ ထို feature ကို ပိတ်ရန် HUAWEI FreeBuds Pro ကို 1.0.0.138 နှင့်အထက် သို့မဟုတ် 11.0.3.301 နှင့်အထက် AI Life App ကို upgrade လုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
"Find My Earphones" feature သည် EMUI 11 နှင့်အထက်၊ GMS Core အစား HMS Core ကို ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည့် Huawei စမတ်ပစ္စည်းများနှင့် အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို feature ကိုအသုံးပြုရန် Huawei ID ဖြင့်ဝင်၍ "Find Device" feature ကိုဖွင့်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို feature ကိုအသုံးပြုပြီး ရှာဖွေနိုင်ရန် HUAWEI FreeBuds Pro သည် ရှာဖွေသည့်ပစ္စည်းဖြင့် bluetooth နှင့်အရှေ့တွင်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအသံကိုဖွင့်ရန် နားကြပ်သည် ရှာဖွေသည့်ပစ္စည်းနှင့် မီတာ ၂၀ အနီးတွင်ရှိပြီး bluetooth နှင့် ချိတ်ဆက်ထားရန်လိုအပ်ပြီး အနှောင့်အယှက်မရှိ ငြိမ်သက်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုအသံသည် charging case ထဲတွင်ရှိလျှင် အသံမမြည်ပါ။ အမှန်တကယ်အခြေအနေတွင် ကွဲပြားနိုင်သည်။